ShweMinThar: July 2008
Insect bites to someone
ကလေးအများစုဟာ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ချစ်တတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေဖြစ်တဲ့ ခွေး၊ကြောင်တို့ကို အိမ်မှာကလေးတွေနဲ့ အမှတ်တမဲ့ထားရင် ၄င်းတိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ အကိုက်ခံရတတ်ပါတယ်။ကလေးအချင်းချင်း သို့မဟုတ် ကြောင်အကိုက်ခံရတာဆိုရင် ကိုက်ထားတဲ့ နေရာမှာ သွားအပေါက်လေးတွေကျန်ရစ်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခွေးသန်း၊ကြောင်သန်း သို့မဟုတ် အင်းဆက်ပိုးအကိုက်ခံရတာဆိုရင် အပိန့်အနီရောင်၊ပန်းရောင် အကြီးကြီးထလာတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄င်း အဖုအပိန့်ကြီးရဲ့ အလယ်မှာဖြူနေပြီးဘေးအခြေမှာ နီနေတာတွေ့ရ ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီလို အင်းဆက်ပိုးအကိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာ အလွန်ယားယံပြီး ကလေးဟာမကုတ်ရမနေနိုင်ဖြစ်လာတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
အကိုက်ခံရတဲ့ ကလေးဟာ လန့်ပြီးအော်ငိုတတ်ပါတယ်။လူကြီးတစ်ယောက်ယောက်က သိလိုက်ရင် ကလေးကိုငြိမ်သွားအောင် ချော့မော့ပြီး ဘာအကိုက်ခံရတာလဲဆိုတာ သေချာစွာမေးပါ။ကလေးကလေးချင်းသို့မဟုတ် ခွေးသို့မဟုတ်ကြောင်ကိုက်ခံရတာဆိုရင် ကိုက်ထားတဲ့နေရာမှာ သွားရာလေးတွေ တွေ့ရလိမ့်မယ်။ အနာကိုဆပ်ပြာနဲ့ရေဖြင့် သန့်စင်သွားအောင်ဆေးပါ။သွေးသို့မဟုတ် သွားရည် သို့မဟုတ် ဖုန်အမှိုက်များပေနေရင် ပြောင်အောင်ဆေးပါ။ ပြီးလျှင်ပိုးသတ်ဆေးရည်လိမ်းပေးပြီး အနာကိုဆေးထည့်ပါ။ အင်းဆက်အကိုက်ခံရတာဆိုရင် ယားယံတာသက်သာစေသော လိမ်းဆေးလိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။အကယ်၍ အနာမှသွေးထွက်များလျှင် ၊နီရဲရောင်ရမ်းတာပိုများလျှင် ဆရာဝန်နှင့်ပြပါ။
ခွေးသန်းသို့မဟုတ် ကြောင်သန်းသို့မဟုတ် ပျားသို့မဟုတ် အင်းဆက်ပိုးလေးတွေကိုက်ခံရရင်တော့ အဖုအပိန့်များထလာပြီးအလွန်ယားတတ်ပါတယ်။ ပျားတုပ်ခံရတာဆိုရင် အလွန်နာတတ်ပါတယ်။ ဓာတ်မတည့်ပျောက်ဆေး တစ်ခုခုကို တိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေ ကလေးတွေနဲ့ အင်းဆက်ပိုးအကိုက်ခံရမှုတွေဟာ ဆိုးဝါးခဲပါတယ်။သို့သော် ၄င်းအနာဟာ တစ်ခါတစ်ရံ ပိုဆိုးတတ်ပါတယ်။
(၂) အဲဒီအခါ ဘာလုပ်ရမလဲ
အကယ်၍ အကိုက်ခံရတဲ့ အနာဟာပိုကြီးလာမယ်ဆိုရင် မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်မိသားစု ဆရာဝန်နှင့်အနာကိုပြပြီး လိုအပ်ပါက ဆရာဝန်က မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးပါလိမ့်မည်။
အနာမှာ ပိုးဝင်တယ်ဆိုလျှင် ဆရာဝန်က ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးလည်းပေးပါလိမ့်မယ်။
(၃) မိဘအနေဖြင့် ကလေးအား ဘာတွေအကူအညီပေးနိုင်လဲ
မိဘများအနေဖြင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးများနှင့်ကလေးငယ် အားမကျီစယ်သင့်ပါ။တိရစ္ဆာန်လေးများကို သေချာစွာပြုစုထိန်းသိမ်းထားပါ။ ကလေးငယ်များနှင့် လွှတ်မထားရပါ။ သို့မဟုတ်ပါက ကလေးငယ်များက၄င်း တို့၏အမွေးသို့မဟုတ် အမြီးများကိုဆွဲကိုင်ခြင်း၊ ပွတ်သပ်ခြင်းမပြုလုပ် နိုင်အောင် သတိထားစောင့်ကြည့်ပါ။ခွေး၊ကြောင်တို့အား တိရစ္ဆာန်ကုဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်၍ ခွေးရူးပြန်ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးပေးပါ။
အိမ်ရှိကော်ဇော၊ခန်းစီး၊ ပြတင်းပေါက် လိုက်ကာစသည်တို့ကို တစ်ပတ်တစ်ခါသန့်ရှင်းပေးပါ။ ခွေးသန်း၊ကြောင်သန်းများ ကလေးကို ကိုက်တယ်လို့ သံသယရှိပါက ၄င်းတို့ကိုဖွပ်လျှော်ပေးရန်လိုပါသည်။၄င်း တိရစ္ဆာန်လေးများကိုလည်းရေချိုး သန့်စင်ပေးဖို့လိုပါသည်။ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုခန်းများမှ အထူးစီမံထားသော ခွေးသန်း၊ကြောင်သန်း သက်သာစေသော ပေါင်ဒါမှုန့်များ ၀ယ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါမှမဟုတ် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် အားသင့်တိရစ္ဆာန်လေးများအားခေါ်ယူပြီးပြသင့်ပါတယ်။
ကလေးငယ်အား ခြင်ကိုက်ခံရတာဆိုရင် ခြင်မကိုက်အောင် ခြင်ထောင်ခပ်ကြီးကြီးထောင်ထားပြီး အထဲမှာ ဆော့ပါစေ။လူကြီးကစောင့်ကြည့်ထားပါ။
Posted by Alex Aung at 9:44 PM No comments:
Adventure of Kids
ကလေးကို စွန့်စားခန်းများပြုလုပ်ခွင့်ပေးရန် အားပေးမြှင့်တင်တဲ့ အလုပ်ကတော့ တကယ်ကိုတန်ဖိုးပေးဆပ်ရပါတယ်။ အနည်းဆုံး သူ့ကိုယ်သူ ဘယ်ဘောက်အတိုင်းအတာအထိ လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိလာစေရန်နှင့်စွန့်စားလိုစိတ် ဖွံ့ဖြိုးလာအောင် လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းဟာ သူ့ကိုယ်သူ့ ယုံကြည်မှုရရှိစေသော အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
မိဘကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ မိမိကလေးငယ်ရဲ့ ကြောက်စိတ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးခြင်းဟာ မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုပါပဲ။ ကလေးရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေဟာ သူ့အတွက် ခံစားနိုင်ဖို့နှင့် သတိထားနိုင်ဖို့ လုံလောက်ပါတယ်။
မိမိကလေးကို အကာအကွယ်ပေးလွန်းသော မိဘတွေဟာ ကလေးတွေရဲ့ စွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်ခွင့် မပေးကြ ပါဘူး။ ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေကို လုပ်ကြည့်ရန်လည်းခွင့်မပေးပါဘူး။စွမ်းဆောင်မှုအသစ်တွေကိုလည်း လုပ်ခွင့်မရပါဘူး။ အဲဒီမိဘတွေဟာ ကလေးအားထိန်းချုပ်လွန်းတဲ့အတွက် အဲဒီကလေးငယ်ဟာ ပူးပေါင်းညှိ နှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုလျော့နည်းစေပါတယ်။ ကလေးငယ်အနေနဲ့လည်း သူတို့ခန္ဓာ ကိုယ်အား ဂုဏ်ယူတတ်ခြင်း၊ယုံကြည်မှုရှိခြင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်ရှိခြင်းတို့မှ ကင်းဝေးစေပါတယ်။
၄နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ယောက်ဟာ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းရှိမှုတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခံစားသိရှိနိုင် ပြီး ဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိ၊မရှိ၊ဘေးကင်းစိတ်ချမှုရှိ မရှိ အန္တရာယ်ရှိ မရှိကိုလည်း စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်သော အရွယ်ဖြစ်ပါ တယ်။။ ကစားကွင်းထဲမှာ သံဘားတန်းများကိုတွယ်၍ တက်သောကစားနည်းဟာ သူတို့အတွက် စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံများရရှိစေပါတယ်။ သုတေသနပြုချက်များအရ အဲဒီအရွယ်ကလေးငယ် တွေကို သူတို့ကိုယ်ပိုင်ကိရိယာတန်ဆာပလာများနဲ့ လွှတ်ပေးထားတဲ့အခါ ကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန် ပြီးလုပ်ဆောင်တာမျိုးရှားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၄နှစ်အရွယ်ကလေးတွေမှာ စွမ်းအင်တွေ အကန့်အသတ်မဲ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တွယ်တက်ခြင်း၊ စက်ဘီးခြေနင်းကိုနင်းခြင်း၊ လျှောစီးခြင်း စတဲ့အလုပ်မျိုးကို လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိလာပါပြီ။ မိဘများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကတော့ အဲဒီလိုပစ္စည်းမျိုးတွေ အိမ်အတွင်းမှာထားပေးဖို့ပါပဲ။ အလွယ်တကူ ကြီးကြပ်ပေးနိုင်တဲ့မြင်ကွင်းမှာ ထားပေးရပါမယ်။
လိုအပ်ရင် ခက်ခဲတဲ့အလုပ်မျိုးတွေ့ပါက လမ်းညွှန်ပြသပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ်စက်ဘီးဆိုရင် ငြိမ်သွားအောင် ဘီးအပိုတတ်ပေးတာမျိုးလုပ်ပေးပါ။ ကလေးကိုမလုပ်ရဘူးလို့ မတားဆီးသင့်ပါ။ ဒီနည်းအားဖြင့် ကလေးအတွက် သူ့ဘ၀တစ်လျှောက်မှာ အဲဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး နှစ်သက်ခံစားနိုင်သော အခြေခံချပေးရာရောက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ကလေးကို ကျွမ်းကျင်မှု ပိုမိုရရှိလာစေလိုသော ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာအောင် အားပေးရပါမယ်။ မသိသေးတဲ့နယ်ပယ်အတွင်းမှာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိလာစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးကိုကောင်းစွာ ထိန်းသိမ်းတတ်ပြီး ယုံကြည်မှုရှိသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် ကူညီပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သားငယ်များအား စွန့်စားရဲတဲ့သတ္တိရှိလာစေရန် ဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲ
(၁) လှုပ်ရှားကစားရသော ကစားနည်းများကို ကူရှင်ခံထားသည့် ပျော့ပျောင်းသော ကြမ်းပြင်အကျယ်ပေါ်တွင်ကစားနိုင်ရန် ကူညီပေးပါ။
(၂) အကွာအဝေး အကျဉ်းအကျယ်ကိုမှန်းဆရသော ကစားနည်းမျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါ။ ထိုကစားနည်းမျိုးက စွန့်စားတွေးခေါ်မှုကို လှုံ့ဆော် ပေးနိုင်ပါတယ်။
(၃) မုန့်ထည့်သည့် ကတ်ဘူးဟောင်းကဲ့သို့သော ပစ္စည်းအခွံများကိုပေး၍ကစားစေခြင်းဖြင့် ဘာပစ္စည်းလဲဟု စူးစမ်းစပ်စုချင်စိတ်ပေါ်ပေါက် လာအောင်ပြုလုပ်ပေးပါ။
(၄) ကြိုးလှေကား၊ဒါန်းစင်၊ စက်ဘီး၊ စကိတ်၊ဘောလုံး စသည့်ကစားစရာပစ္စည်းများ ၀ယ်ပေးပါ။
သမီးငယ်များအား စွန့်စားရဲတဲ့ သတ္တိရှိလာစေရန် ဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲ
(၁) စွန့်စားခြင်းကြောင့် ညစ်ပတ်ပေရေသွားခြင်းကို ဘယ်တော့မှဇာချဲ့ပြီး မဆူမငေါက်ပါနဲ့။
(၃) သမီးငယ်အား သားလေးတစ်ယောက်သဖွယ် စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ယောက်ျားလေးတွေ ကစားလေ့ရှိသော အမြင့်တက်ခြင်း၊ခိုစီးခြင်း၊ ဟန်ချက်ထိန်းညှိရသောကစားနည်းများကစားခြင်း၊ ဘောလုံးကန်ခြင်းစသည့် ကစားနည်းများကိုကစားခိုင်းပါ။
(၄) စက်ဘီးကဲ့သို့သော ကစားစရာများကို စောစောစီးစီးဝယ်ပေးပါ။
Posted by Alex Aung at 9:40 PM No comments:
I don't throw it away !
ဘ၀မှာ အများကြီး မလိုချင်ပါဘူး
Posted by Alex Aung at 8:46 PM No comments:
တချို့ကလေးတွေဟာ အပေါင်းအသင်းကလည်း သိပ်မရှိ၊ နေရာတကာ လူကြောက်ပြီးနေ တတ်ကြတဲ့အခါ လူကြီးတွေက အဲဒီကလေးတွေကို အရှက်အကြောက်ကြီးတဲ့ ကလေးတွေ ပဲလို့ပေါ့ပေါ့ဆဆ သတ်မှတ်လိုက်ရင် လွန်စွာမှားပါလိမ့်မယ်။တကယ်တော့ အဲဒီကလေးတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ တကယ့်လက်တွေ့ပြဿနာဟာ အရှက်အကြောက်ကြီးတယ်ဆိုတာထက် ပိုဆိုးနေတတ်လို့ပါပဲ။
(၁) အထီးကျန်ဆန်ဝေဒနာခံစားနေရခြင်း၊ အပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်းတွေ မရှိဘဲ တစ်ဦးတည်း အထီးကျန်နေရမှုဟာ မိဘတွေကို ကြေကွဲဖွယ်မြင်ကွင်း တစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်။
(၂) သူတို့ဟာ သူတို့ကို ဂရုစိုက်မှု၊သူတို့ကို ချစ်ခင်ယုယမှုတွေကို လိုချင်တာကြောင့် သူတို့ရဲ့လိုချင်အတ္တကို သဘာဝမကျတဲ့ အပြုအမူအမျိုးမျိုးနဲ့ ပုံဖော်တောင်းဆိုတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုအခြေအနေကို ဆေးပညာ၌ လှုပ်ရှားတက်ကြွလွန်အဆင့်ဟုခေါ်ပါတယ်။
(၃) ဒါ့အပြင် သူတို့ရဲ့လိုချင် အတ္တတွေကို တစ်စုံတစ်ဦးကမျှကူညီ ဖေးမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှု မရှိလျှင် သူတို့ဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ယုံကြည်မှုတွေပျက်သုဉ်းသွားပြီး လိမ်ညာပြောဆိုခြင်း၊ သူများပစ္စည်းခိုးဝှက်ခြင်း၊အားနည်းသူကိုအနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ အရွယ်ရောက်တဲ့အခါ အပေါင်းအသင်းမှားပြီး အရက်စွဲ၊မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်းတွေအထိ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိဘတွေအဖို့ ကိုယ့်သားသမီးတွေကို ငယ်စဉ်ကတည်းက သူကရှက်တတ်တယ်၊ ကြောက်တတ်တာပဲလို့ ပေါ့ပေါ့လေးတွေးမနေတတ်ဘဲ တကယ်ပဲ သူဟာ သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည်မှု တွေ ကင်းနေတာလားဆိုတာ သေချာဆန်းစစ်ဝေဖန်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ယုံကြည်ချက်တွေ ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပြုပြင်ထိန်းကျောင်းစောင့်ရှောက်သွားဖို့လိုပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 8:35 PM No comments:
When you brought Wine.....you can ask this questions
“၀ိုင်”ကိုဝယ်တော့မည်ဆိုလျှင် သင်ရွေးချယ်ထားသည့်အထဲမှ အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူဖို့သင့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်’၀ိုင်’ကိုမ၀ယ်ယူခင် မြည်းစမ်းကြည့်ပါ။သို့မှသာ သင့်အကြိုက်ဆုံး စတိုင်လ်ကိုရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ သင်ဈေးကြီးပေးဝယ်ထားရမည့် ၀ိုင်အကြောင်းမွေးခွန်းတွေမေးဖို့ပါပဲ။ ၀ိုင်တစ်ပုလင်း ရွေးချယ်ဝယ်သည့်အခါ သိသင့်သိထိုက်သည့်အချက်များ၊ မေးသင့်သည့် မေးခွန်းများကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
- ၀ိုင်ရဲ့အရသာဟာ ဘာနဲ့တူပါသလဲ။
- မည်သည့် စပျစ်အမျိုးအစားနှင့်ပြုလုပ်ထားပါသလဲ။ (အကယ်၍ လေဘယ်မှာ မဖော်ပြထားလျှင်။)
- ၀ိုင်ဟာ နှစ်ဘယ်လောက်ကြာကြာထား ပြီးရင်သောက်သုံး ဖို့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီလဲ။
- ၀ိုင်ကို ဘယ်လောက်ကြာအောင်သိမ်းထားနိုင်ပါသလဲ။
- မည်သည့်နေရာ၊မည်သို့ သိမ်းဆည်းရမည်လဲ။
- ရေခဲမှတ်အမြင့်ဆုံးနှင့် အေးခဲထားသင့်သလား။
- အခြားပုလင်းတစ်လုံး(သို့မဟုတ်) သိမ်းဆည်းစရာပုံး၊ခွက် စသည်ထဲ သို့ ပြောင်း၍ထည့်သင့်သလား။
- ၀ိုင်အရက် သောက်သုံးရန်ထည့်သည့် ဖန်ခွက်၏ပုံသဏ္ဍာန်သည် အရသာကို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်သလား။
- မည်သည့် အမြည်းစားစရာနှင့် လိုက်ဖက်ညီပါသလဲ။ မည်သည့် အမြည်းအမျိုးအစားက ၀ိုင်အရသာကိုပျက်စီးစေသလဲ(သို့မဟုတ်) ၀ိုင်ကို သူ့ချည်းသက်သက်ပဲသောက်သင့်သလား။
What did Kidney and Livers do in our body?
လူရဲ့ကျောက်ကပ်တွေဟာ ပဲသီးစေ့နဲ့ သဏ္ဍာန်တူတဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြပြီး နောက်ကျောဘက်ခါးဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတည်ရှိနေပါတယ်။ကျောက်ကပ်တစ်ခုစီမှာ လက်သီးဆုပ်တစ်ဆုပ်စာအရွယ်အစားခန့်ရှိပြီး ၁၅၀ဂရမ်အလေးချိန်ရှိပါတယ်။ ကျောက်ကပ်များဟာ ၂မိနစ်တစ်ခါ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့သွေးထောက်ပံ့မှုကို စစ်ထုတ်ပေးပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ထဲရောက်လာတဲ့ သွေးတွေထဲမှာ အဆိပ်အတောက်များ၊ အညစ်အကြေးပစ္စည်းများနဲ့ ပိုလျှံနေသောဆားဓာတ်များကို စစ်ထုတ်ပေးပြီး ဆီးထဲမှတစ်ဆင့် ၄င်းပစ္စည်းများကို အပြင်သို့စွန့်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်တွေဟာ သွေးပေါင်ချိန်ကိုမှန်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ ဟော်မုန်းတွေ ထုတ်ပေးတဲ့အပြင် သွေးနီဥများကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးတယ်။ အရိုးတွေကိုလည်း သန်မာစေပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အကြီးဆုံးအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကြီးတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ရုံသာမက(အဆိပ်အတောက်တွေကို)ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ အရေးကြီးဆုံးအင်္ဂါများအနက်တစ်ခုအပါအ၀င်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အသည်းမှာ ခပ်လုံးလုံးအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်ပြီး ညာဘက်ရင်ညွန့်နဲ့နံရိုးများအောက်ဘက်မှာ တည်ရှိပါတယ်။ အသည်းမှာ အတွင်းဘက်အာရုံကြော အဆုံးဘက်တွေမရှိတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်စရာ ကောင်းပါတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် အသည်းကို တိတ်တိတ်လေးနေတတ်တဲ့အင်္ဂါအဖြစ် လူသိများကြပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အသည်းမှာ ရောဂါဝေဒနာစွဲကပ်လာတဲ့အခါနောက်ကျတဲ့ အခြေအနေရောက်တဲ့တိုင်အောင် မနာမကျင်ဘဲရှိလို့ပါပဲ။ အသည်းဟာ သွေးခဲချိန်မှန်စေတဲ့ အသားဓာတ်တွေကို ပြုလုပ်ပေးတယ်။သွေးထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဓာတ်ပြယ်စေတယ်။ ကူးစက်ရောဂါကို တိုက်ခိုက်ရန်ရောဂါပြီးစေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဆီဓာတ်ကို ချေဖျက်ပေးရန် သည်းခြေရည်ကိုလည်း ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့အပြင် ဗီတာမင်များ၊ သံဓာတ်နဲ့ ဂလူးကို့စ်တို့ကိုလည်း စုဆောင်းထားပေးပါတယ်။
အသည်းနဲ့ကျောက်ကပ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်ခြင်းမှထွက်လာတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို အပြင်ဘက်စွန့်ထုတ်ပစ်ဖို့တာဝန်ယူရတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းနဲ့ကျောက်ကပ်အားကောင်းစေဖို့ သင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းအချို့ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
(၁) ဆားများတဲ့(ဆားငန်တဲ့) အစားအစာတွေဟာ သင့်ကျောက်ကပ်တွေကို ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်နှစ်ပြီးတို့စားရတဲ့ အချဉ်ရည်တွေ၊ ငရုတ်ဆီတွေ၊ဟင်းအနှစ်တွေအများကြီးမစားပါနှင့်။
(၂) ရေသောက်နည်းလွန်းတာဟာ ဆီးထဲမှာ သတုဓာတ်ဆားတွေစုပုံများစေကာ ကျောက်တည်စေခြင်း၊အဆိပ်အတောက်အညစ်အကြေးများ စစ်ထုတ်ပေးတဲ့လမ်းစဉ်ကို နှောင့်ယှက်ခြင်းတို့ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဆီးထဲပိုးဝင်ရောက် မတွယ်စေရန် နေ့စဉ်ရေ၂လီတာ(ရေသန့် ၁လီတာဝင်၂ဘူး)ခန့်သောက်ပါ။
(၃) ကျောက်တည်စေတဲ့ အစားအစာများစားခြင်းလျှော့ပါ။ ဥပမာ- အနီရောင်အသားများ(အမဲ၊ဆိတ်၊၀က်)၊ပင်လယ်စာများ(ပုဇွန်၊ဂဏန်း)၊ ဟင်းနုနွယ်၊ရူဘတ်မုန်လာဥနီ၊ချောကလက်၊ဒူးရင်းသီး၊ချဉ်ပေါင်ရွက်။
(၄) အသည်းရောင်အသားဝါ(အေနှင့်ဘီပိုး) ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။
အသားအများကြီးစားသုံးခြင်းဟာ အသည်းကိုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဒဏ်ပိစေပါတယ်။ တစ်နေ့လျှင် ငါးကျပ်သားစားလျှင်လုံလောက်ပါတယ်။ခေါင်းကိုက်ပျောက်ဆေးများ၊ ပဋိဇီဝဆေးများမှန်မှန်သုံး စွဲခြင်းကလည်းမကောင်းပါ။ဆေးအများစုဟာ ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်စေခြင်း သို့မဟုတ်အသည်းက ပယ်ထုတ်ပစ်ရတဲ့ အတွက် ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့သူတွေမှာ ဆေးအချို့ဟာ အသည်းကိုဒဏ်ရာ ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 9:22 PM No comments:
- အိပ်မက်ကို ရဲရဲမက်လိုက်ပါ
ဒီတော့မှ ဘ၀ဟာ ချိုမြိန်စေမှာပေါ့
- ကြမ်းရှတဲ့ ဘ၀ခရီးမျိုး လျှောက်ရတဲ့အခါ
- ကြယ်စင်တွေကို ပြန်ရေတွက်ရင်း ခရီးသွားတဲ့အခါ
အဲဒီအခါ ဘ၀ရဲ့ကြမ်းရှမှုတွေကို မေ့လျော့နေနိုင်တယ်
- နူးညံ့တဲ့ဘ၀ခရီးမျိုး လျှောက်ရတော့လည်း
အိမ်မက်ဟာ အိပ်မက်ပဲလို့ မေ့ထားလိုက်မယ်လေ
- ကိုယ်စိတ်ကိုယ် တိုးတိုးလေး မေးကြည့်ရအောင်
Hello darling nice to see you It's beenalong time
Your just as lovely as you used to be
How's your new love, are you happy
C C7 D
Hope your doing fine just to know it means so much to me
What's that darling how am I doing?
I'm doing all right exept I can't sleep
and I cry all night till dawn.
What I'm trying to say is that I love you and I miss you
and I'm so sorry that I did you wrong.
Look up darling let me kiss you just for old times sake
thank you darling may god bless you
and each step you take brings you closer
to the things you seek to find.
Good bye darling I got to go now.
I got to try to findaway
to lose these memories ofalove so warm and true.
and if you should ever find it in you heart
to forgive me comback darling
Posted by Alex Aung at 9:38 PM No comments:
ကလေးငယ်တွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာသနားစဖွယ် အဖိနှိပ်ခံရဆုံးပါ။ အပြစ်ကင်းစင်ပြီး ချစ်စဖွယ်အလွန်ကောင်းတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သူတွေဟာ ဘယ်သူတွေလဲ၊ သူတို့ကို အလွန်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မိဘတွေပါပဲ။
ယနေ့ ကလေးငယ်တွေက သူတို့ရဲ့မှီခိုအားထားရာ မိဘများရဲ့မသိနားမလည်မှုကြောင့် အနှိမ်ခံဘ၀.... အသုံးချခံဘ၀ကိုရောက်နေပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာ....မိဘတွေရဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်လောဘ ကြောင့် ကလေးငယ်တွေဟာ အရွယ်နဲ့မမျှအောင် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းတွေ ခံနေရပါတယ်။
မိဘတွေဟာ...သူတို့မဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရည်မှန်းချက်အကြွေးတွေအတွက် ကလေးတွေကို အတင်းအဓမ္မဆပ်ခိုင်း တာရက်စက်လွန်းပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်လွန်းပါတယ်။ မိဘတွေဟာ သူတို့ရက်စက်လို့ ရက်စက်မှန်းလည်းမသိပါဘူး။ အစဉ်အလာ...ရိုးရာယုံကြည်မှုတွေအရ မိဘမေတ္တာလို့ထင်နေတာကိုး။
မိဘမေတ္တာကို မျက်နှာပန်းပြပြီး အသက်ဆယ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်ဟာ အရွယ်နဲ့မမျှအောင် သင်ကြားမှုအမျိုးမျိုးခံနေရပါတယ်။ ကလေးငယ်အတွက်...အလွန်အဖိုးထိုက်တန်ပြီး တစ်ဖန်ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ ဆော့ကစားချိန်လေးတွေ လုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။မိဘများက ဒီလိုသင်ကြားမှ ပညာတတ်ကြီးဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်နေတာကိုး..။ ပညာတတ်ပြီး ခပ်တုံးတုံးဖြစ်နေတဲ့ ကလေးတွေကို မြင်ဖူးပါသလား၊ အဲဒါ....မိဘတေါ အသုံးမကျလို့ပါ။ တကယ်တော့....မိဘဟာ ကလေးကို ချစ်တာမဟုတ်ဘဲ သူ့ကိုယ်သူချစ်တာပါ။ မိဘရည်မှန်းချက်ကြီးလေ....ကလေးအနှိမ်ခံရလေပါပဲ။ မိဘအတ္တကြီးလေ...ကလေးလုံခြုံမှုကင်းမဲ့လေပါပဲ။
မိဘတွေက ငါ့သားသမီးကောင်းစားစေချင်လို့ စေတနာ၊မေတ္တာထားတယ်လို့ထင်မှာပဲ။ ဒါပေမဲ့...အမှန်တကယ် ကလေးငယ်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘဲ သူ့တို့ကိုယ်သူတို့ ချစ်တာပါ။ ကလေးငယ်ထက် သူတို့ ]]အတ္တ}}ဖွံ့ဖြိုးဖို့သာ အဓိကပါ။ သူတို့သားသမီးတွေဘယ်ဂုဏ် ဘယ်အဆင့်အတန်းရောက်နေပြီဆိုတာ လူ့ဘုံအလယ်မှာ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားချင်ကြတယ်။
မိဘတွေဟာ ကိုယ့်သားသမီးကောင်းစားတာကိုအမှန်တကယ်မြင်ချင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒီလိုဖြစ်ချင်တာဟာ ကလေးအတွက်မဟုတ်ဘဲ သူတို့အတွက်ပါပဲ။ငါတို့မွေးတဲ့ ကလေးဟာကြီးပွား ချမ်းသာပြီး ပညာတတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ မြင်ချင်တဲ့အတ္တကြောင့်ပါ။ သေသေချာချာစဉ်းစားကြည့်ရင် မိဘက ကလေးထက်သူတို့ရည်မှန်းချက်ကိုပိုချစ်တာပါ။
ကလေးငယ်တွေအတွက် ငယ်စဉ်ဘ၀ဆော့ကစားချိန်တွေဟာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူး။ သူတို့အတွက် ဆော့ကစားချိန်လေးတွေဟာ နောက်တစ်ခါလည်း ပြန်မရနိုင်တော့ပါဘူး။ဆော့ကစားခြင်းဟာ ကလေးဘ၀အောင်မြင်ရေးအတွက် အကြီးမားဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်ပါ။ငယ်စဉ်က ဆော့ကစားဖို့အခွင့်အရေး များများရလေလေ ကလေးထက်မြက်လေပါပဲ။
ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့ မိဘတွေဟာ ကလေးထိန်းတွေ၊အိမ်ဖော်တွေ တစ်ပုံတစ်ပင်ကြီးနဲ့ ကလေးကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်ထားပြီးမှဲ့တစ်ပေါက်စွန်းထင်းမခံရဘူးလို့ ထင်မြင်ယူဆကြပါတယ်။ ကလေးထိန်းတွေ၊ အိမ်ဖော်တွေနောက်က တကောက်ကောက်လိုက်ပြီး ချုပ်ချယ်နေတာ ကလေးဘ၀ရဲ့ ပင်ကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထိခိုက်ခံရတယ်ဆိုတာ ပညာတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မိဘတွေမသိပါဘူး။
မိဘတွေက ချုပ်ချယ်မှုကြီးလေ ကလေးရဲ့ ပင်ကိုယ်ဖန်တီးမှု၊ထက်မြက်မှု ဆုံးရှုံးလေပါပဲ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ပညာတွေအများကြီးတတ်ပြီး ခပ်တုံးတုံးဖြစ်နေတဲ့ လူငယ်တွေဟာ ငယ်စဉ်က ချုပ်ချယ်မှုကြီးလွန်းလို့ပါ။မိဘတွေဟာ အစဉ်အလာအရ ရိုသေကိုင်းရှိုင်းတဲ့ ကလေးငြိမ်ဝပ်ပိပြားတဲ့ ကလေးကိုမှ ချစ်ခင်ကြတယ်။ မိမိကလေး ကျိုးနွံပြီး လိမ္မာယဉ်ကျေးတာကို ဂုဏ်ယူကြတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကလေးကို အရွယ်နဲ့မမျှအောင် ကျိုးကျိုးနွံနွံဖြစ်အောင် ဂရုတစိုက်သင်ကြားပေး ကြတယ်။ဒါတွေဟာ ကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုထိပါးပြီး အစွမ်းအစနည်းပါးစေတာ မသိကြဘူး။ တကယ်တော့ ကျိုးနွံတဲ့ကုပ်ချောင်းချောင်းကလေးထက် အစွမ်းအစရှိတဲ့ကလေးဟာ ပိုပြီးထက်မြက် ကျွမ်းကျင်လေပါပဲ။ အရွယ်ရောက်လာရင် ကျိုးနွံတဲ့ကလေးထက် အစွမ်းအစရှိတဲ့ ကလေးကအများ ကြီးရှေ့ကိုပိုရောက်သွားမှာပါ။
မိဘတွေဟာ အကင်းပါးပြီး ထက်မြက်တဲ့ ကလေးကိုအမှားတွေ့မှာ စိုးရိမ်တတ်ကြတယ်။ ထက်မြက်တဲ့ ကလေးကိုတော့ အပိုးမကျိုးတဲ့ ကလေးလို့ယူဆကြတယ်။ ကျိုးနွံတဲ့ကလေးကို မိဘစကားနားထောင်ပြီး လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့ကလေးလို့ ယူဆချင်ကြတယ်။တကယ်တော့ ...ကလေးကျိုးနွံလေ အရည်အချင်းမဲ့ပြီး ပင်ကိုယ်ဗီဇထိပါးလေပါပဲ။
မိဘက ကလေးကို တတ်နိုင်သမျှလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခွင့်ပေးပါ။ ပင်ကိုယ်ဗီဇဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ကူညီပေးပါ။ ကလေးအတွက်မထိခိုက်ဘူး အများအတွက်လည်း မထိခိုက်ဘူးဆိုရင်.....ဘာမဆို လုပ်ခွင့်ပေးပါ။ ချုပ်ချယ်မှုနဲ့ သင်ကြားမှု မတူတာကို သတိပြုပါ။
ကလေးနဲ့ မထိုက်တန်တဲ့ သင်ကြားမှုအကြီးကြီးတွေကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ တကယ်တော့ သင်ကြားမှုအကြီး တွေဟာ ကလေးကို အပေါ်ယံသာ တတ်ကျွမ်းစေပြီးကြက်တူရွေးဘ၀ရောက်စေမှာပါ။ ကလေးစိတ်မပါ တဲ့အရာကိုသင်ကြားရင် ဘယ်တော့မှ အမှန်တကယ်မတတ်ပါဘူး။ကလေးက တတ်ဟန်ပြရင်လည်း တကယ်တတ်တာမဟုတ်ဘဲ ကြက်တူရွေး နှုတ်တိုက်ရွတ်သလို ဟန်ဆောင်ပြနေတာပါ။
မိဘတွေက ကလေးငယ်တွေကို ဘုရားရှိခိုးအမျိုးမျိုးသင်၊ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းတွေ တက်ခိုင်းပြီး ဧည့်သည်စုံရင် အလွတ်ရွတ်ပြခိုင်းကြတယ်။ကလေးတတ်တယ်ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူချင်ကြတယ်။ တကယ်တော့ ယဉ်ကျေးလိမ္မာတွေဟာ ငယ်ရွယ်လွန်းတဲ့ကလေးတွေရဲ့ ရင်ထဲကိုမရောက်ပါဘူး။ ကြက်တူရွေးနှုတ်တိုက်ရွတ်သလို ရွတ်ပြနေတာပါ။
ဟန်ဆောင်ပကာသနကို အဟုတ်ထင်ရင်တော့ အရွယ်ရောက်လာရင် ကိုယ့်ကလေးပဲ ဒုက္ခရောက်မှာပါ။
Posted by Alex Aung at 7:38 PM No comments:
Quotes from RD.
GENIUS is IMMEDIATE but talent takes time.
Novelist JANET FLANNER
There's nothing you've ever been Successful at that you didn't work on every day.
WILL SMITH In Time.
Success isalousy teacher. It seduces people into thinking they can't lose.
The opposite of love isn't hate it's indifference. If you hate me, that means you still care.
MARCIA CROSS on Desperate Housewives.
You can't leaveafoot-print that lasts if you're walking on tiptoe.
Posted by Alex Aung at 9:01 PM No comments: